Vaovao - Diany vaovao fampidirana indostrialy, mifandray tanana ary mamorona toko vaovao
Ny Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd., izay nametraka haavo vaovao isaky ny avy, dia nanomboka fotoana manan-tantara manan-danja. Tamin'ny 12 aprily 2021, nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika ny Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. ary ny Home Technology Co., Ltd. Voalaza fa ny roa tonta dia nahazo marimaritra iraisana momba ny fiaraha-miasa amin'ny fampidirana marindrano ny indostria, ny fanofanana ny fahaiza-manao ary ny fanavaozana ny teknisiana nify, ny fifanakalozana teknika ary ny fampandrosoana ny indostria.
Amin'ity fiaraha-miasa stratejika ity dia nisy ny dinika lalina sy ny pitsopitsony momba ny fampiharana natao tamin'ny famokarana sakana zirconium seramika rehetra, zavamaniry fanodinana nify, fampiofanana sy fianarana teknika ary vokatra namboarina namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Ny fahazoana mivoatra dia nanatsara ihany koa ny fifandraisana lalina amin'ny rohy rehetra, nanafaingana ny faharetan'ny fahazoana mombamomba ny indostria sy ny filan'ny mpanjifa, ary nanao vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa.
Bi Wenjuan, mpitantana lefitra jeneralin'ny Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. dia nanolotra: Ny fampidirana marindrano ny indostrian'ny Yurucheng sy ny Dentist's Home, ny fampifangaroana ny fitaovana nify, ny fizarana loharanon-karena ara-dalàna, ny halalin'ny indostria ary ny fampiroboroboana ny fifaninanana indostrialy Ny hery rehetra dia misy vokany tsara. Manan-danja tokoa izy io amin'ny fampidirana sy ny fidiran'ireo indostria any ambony sy ambany ny lavaka am-bava toy ny famokarana fitaovam-nify, ny zavamaniry fanodinana nify, ny toeram-pitsaboana nify, sns. filan'ny mpanjifa farany, manaparitaka ny sakana amin'ny indostria ary ny fahaizan'ny indostrian'ny fifanakalozana. Tsia, mba hanompo bebe kokoa ny mpampiasa farany.
Liu Jianjun, filohan'ny Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. dia nilaza hoe: Miaraka amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tenan'ny besinimaro sy ny firongatry ny politika nasionaly hitantanana dokotera manokana, ny indostrian'ny nify dia nanolotra fotoana lehibe ho an'ny fampandrosoana. Eo ambanin'ny toe-javatra misy ny valan'aretina ankehitriny, "loza" ary "fotoana mety" iaraha-miaina. Na dia mahita ny fiantraikan'ny valanaretina amin'ny indostrian'ny vava aza isika, dia mila mieritreritra lalina ny firoboroboan'ny indostrian'ny vava amin'ny ho avy, mifantoka amin'ny ankehitriny ary mametraka ny ho avy. "Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny nify dia namorona gadona indostrialy feno, izay mitaky antsika hiditra amin'ny sehatry ny fifaninanana mahasalama sy ny fampidirana am-pandrosoana mandroso haingana. Amin'ny fitantanana manara-penitra ihany no ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana maharitra sy maharitra ny indostria.